copy protect တွက် ideas အချို့ — MYSTERY ZILLION
copy protect တွက် ideas အချို့
June 2010 edited February 2011 in Project
ကျနော် စဉ်းစားမိတယ်။ ဆော့၀ဲလ်များအတွက် copy protect idea လေးတော့ရှိတယ်။ လုပ်နည်းတော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ developer တွေကြိုးစားကြပေါ့။
1. ဆော့၀ဲလ် ရေးတာနဲ့ run တဲ့အချိန်မှာ right click အထဲ copy and paste option ထည့်မထားရ။ဒါအပြင် အခြား သင့်တော်မယ့် ဟာ (ကူးလို့ရနိုင်မယ့်ဟာတွေ) မထည့်ထားရ။
2. software betaသို့မဟုတ် trial version အား လိုင်စင်အဖြစ်သုံးချင်လျှင် နောက်ထပ် software တချပ်မှာ trial သို့မဟုတ်betaဗာရှင်းအား လိုင်စင်အဖြစ်ပြောင်း၇န် ပရိုဂရမ်တစ်ခုထည့်ထားပြီး ၄င်းမှတဆင့်သာ ဆောင်ရွက်စေရန် စီစဉ်ထားရန်။
3. beta and trial ဗားရှင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာပေးထားသော ကာလမကုန်ခင် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကာ သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ အလိုလျောက် software သို့မဟုတ် program သည် အလိုလျောက် ပျက်ခြင်း uninstall auto ဖြစ်ခြင်းများရှိနေစေရန်။
4. software သို့မဟုတ် program သည် ကော်ပီးကူးမ၇သည့်နည်းတူ စက်တစ်လုံးတွင် တကြီမ်သာ install လုပ်ရရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စက်အေ၇တွက်တိုင်းသာ install လုပ်ရနို်င်ရန် စိီမံထားရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်သွားပါက ၄င်းစီဒီ သို့မဟုတ် အင်စတောလာ သည် အလိုလျောက်သုံးမရပဲဖြစ်သွားရမယ်။
၇မရ ဟုတ်မဟူတ်တော့ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ လုပ်မရတော့ သေသေချာချာမသိသေးပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ဖတ်ပြီး ပြန်ရေးကြပေါ့ဗျာ
တော်တော်နောက်တဲလူပဲရေးထားတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် IT knowledge သေသေချာချာမရှိတာသေချာပေ၏။ microsoft လိုလူတွေကတောင်လုပ်မရလို့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်မဟုတ်လား။
- ဆော့၀ဲလ် ရေးတာနဲ့ run တဲ့အချိန်မှာ right click အထဲ copy and paste option မထည့်ထားရဆို၏ ဒါဆို copy ဘာကိုမှကူးလို ့မရတော့အောင်လား? အဲဒါဆိုfile copy ကူးလို့မရတော့ဘူးနော်စဉ်းစားကိုယ်တော်
- software betaသို့မဟုတ် trial version အား လိုင်စင်အဖြစ်သုံးချင်လျှင် နောက်ထပ် software တချပ်မှာ trial သို့မဟုတ်betaဗာရှင်းအား လိုင်စင်အဖြစ်ပြောင်း၇န် ပရိုဂရမ်တစ်ခုထည့်ထားပြီး ၄င်းမှတဆင့်သာ ဆောင်ရွက်စေရန် စီစဉ်ထားရန်။
ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာကြာပါဘီမအောင်မြင်ရတာကprotect လုပ်ထားတာကလဲလူ ပြန်ဖွင့်တာကလဲလူတွေဆိုတော့ ပိတ်တဲ့လူထက်တော်တဲ့ပြန်ဖွင့်တဲလူတွေအများကြီးရှိတယ် ဒါလဲမရဘူးမေ့လိုက်တော့
-beta and trial ဗားရှင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာပေးထားသော ကာလမကုန်ခင် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကာ သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ အလိုလျောက် software သို့မဟုတ် program သည် အလိုလျောက် ပျက်ခြင်း uninstall auto ဖြစ်ခြင်းများရှိနေစေရန်။
ဒါတော့မဆိုးဘူး microsoft ကဒီနည်းကို အခုချာတိတ်ဆီကကြားသွားလားမသိ windows 2008 R2 မှာသုံးထားတယ် 14 ရက်ထက်ကြော်ရင် ၁နာရီဆိုတာနဲ server ကြီးကပိတ်သွားရောမအိအိစစချင်းရွာလယ်သွားသေးတယ် ရက် ၁၈၀ ပေးသုံးတယ်ပြောတာကိုးအခုတော့ ၁၄ရက်ဆိုရတော့ဘူး။ ကဲ..ကဲချာတိတ်ရေစိတ်ဆိုးနဲ့မအိအိ ကနံပေးကို ပိဿလေးနဲ ့ပြစ်တတ်တယ်။
ကိုကြော်ကြား ရေးထားတာကို ဖတ်ရတာကတော့ " ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ် ၊ သေသေချာချာတော့ မသိသေးဘူး " အဲဒီလို စကားလေးတွေ ပလင်ခံပြီး သူစဥး်စားသမျှလေးတွေကို ရေးထားတာပါ .
မအိအိ က ဒါကို အိုင်တီ knowledge မရှိဘူး .. ဆိုပြီး နှိမ်သလိုလို ရေးထားတာ . ကို ဖတ်ရပါတယ် .
ဟုတ်ကဲ့ အိုင်တီ knowledge ရှိမရှိဆိုတာကို ဘယ်လိုတိုင်းတာပါသလဲ .
လူဆိုတာ ကိုယ်နှိုင်းပြီး ပြောတတ်စမြဲ ဆိုတော့ ကို်ယ့်လောက်မသိလို့ သူတပါးအား IT knowledge မရှိဟု ပြော၍ မရပါ . .
IT Knowledge မရှိလို့ နောက် ၀င်ပြီး ဆွေးနွေးချင်စိတ်မရှိအောင် . မပြောသင့်ပါ .
microsoft ကလူတွေက တောင် လုပ်မရတာ ဟုူသောစကားကို ပိုပြီး သဘောမကျဖြစ်ရပါတယ်
တခုခုကို အဆင့် အတန်းရှိရှိ ေ၀ဖန်မယ် မယ်ဆိုရင်
ပထမ သိရမှာ က . တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး မေ၀ဖန်ဖို့
ဒုတိယ သိရမှာ က . လူ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေ၀ဖန်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် .
ကျွန်တော် လဲ အိုင်တီ knowledge မရှိဘူး ပြောခံရမှာ စိုးလို့ အင်တာနက် ဂျာနယ် ၊ netguide ဂျာနယ် ။ စတာတွေ ဖတ်ရှုလေ့လာနေပါတယ် ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ copy protect အတွက် ထပ်ပြီး ၀ိုင်း စဉ်းစားကြည့်ရအောင် .
ကလေး အတွေးပဲ ဖြစ်စေ . လူကြီး အတွေးပဲ ဖြစ်စေ .. လျှောက်နောက်ထားတဲ့ ပေါက်တတ်ကရ အတွေးပဲ ဖြစ်ပါစေ ၀ိုင်း ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ် . . .
ကျွန်တော့မှာ convector တစ်ခု ရှိပါတယ် wininnwa ကနေ zawgyi ပြောင်းတဲ့ ဟာလေးပါ .
သူ့ မှာ ရိုးရိုး FREE ပဲ သုုံးချင်ရင် ငါးစက္ကန့် စောင့်ရပါတယ် . FILE SHARING WEB SITE တွေ ရဲ့ သာမန် USER တွေ စက္ကန့် နှစ်ဆယ်လောက် စောင့်ရသလိုပေါ့ .
နောက် သူက ရိုးရိုးဆိုရင် စာလုံး ရေကို ၁၀၀၀ ကန့်သတ်ထားပါတယ် . . .
ဒါက SERVICES အပိုင်းနဲ့ ကန့်သတ်ထားတာပါ . တကယ့် အစစ်အမှန်မှာ ဆိုရင် ( FULL VERSION) မှာ ဆိုရင်တော့ SERVICES အကုန်ရမယ်ပေါ့ .
အဲဒီလို SERVICES အပိုင်း နဲ့ ကန့်သတ်တာမှာ IC အဖွဲ့ က သီချင်းခွေ တွေ မှာ လဲ တွေ့ရပါတယ် မူရင်း ၀ယ်ရင် STICKER လေး တွေ ပေးတယ်ပေါ့ . . ခိုးကူး၀ယ်ရင်တော့ . ရိုးရိုးပဲ ရမယ် . အဲဒီလို သဘောနဲ့ COPY PROTECT လုပ်ကြပါတယ် .
ကျွန်တော် စဉ်းစားဖူးတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် တခါက ကိုသျှန်ေ၀ရေးဖူးတဲ့ CD ejector လေးကိုစမ်းဖူးတယ်။ သူကိုသာ VCD မှာ autorun နဲ ့သာတွဲတင်ပေးလိုက်ရင် အထိုက်အလျောက်တော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သို ့သော် VCD တွေကို ကွန်ပျုတာမှာကြည့်လို ့မရပါဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်နည်းတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့CD ကူးဖို ့အတွက်ကို registry မှာ service တစ်ခုကိုသာပိတ်လိုက်ရင် (စိတ်ကထင်တာပါ သေချာမစမ်းရသေး ) ကူးလို ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းကြီးပိတ်လို ့လည်းမရဘူးလေ။ virus လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ .exe ထဲမှာ timer တစ်ခုမှာ counter တစ်ခုသာ သတ်မှတ်ထားပြီး CD eject ဖြစ်မှ burning service ကို အလုပ်ပေးလို ့လည်း ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ကပြောတာတွေက IT အ၀ဲနပ်မရှိလို့မောင်မောရစ်ကြောင်တောင်တောင်ပြောလိုက်တာလို ့ယူဆနိုင်ကြောင်း
autorun နဲ့တွဲထားတယ်ဆိုပေမယ့် autorun.inf ကို ပိတ်ထားတဲ့စက်တဲ့စက်မှာဆို အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါ။
registry ထဲမှာ value သုံးပြီး ပိတ်မယ်ဆိုလဲ user က သူ့ကိုယ်ပိုင် data ​​ေတွကိုပါ ကူးလို့မရပဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
(ကွျန်​ေတာ့အမြင်များကို ​​​​​ေဆွး​ေနွးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များရှိပါကလဲ ဖြည့်စွတ်​ေဆွး​​ေနွး​ေပးကြပါ)
ကျွန်တော်ကတော့ Software ပဲဖြစ်ဖြစ် CD ပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာအမြင့်တွေနဲ့လုံး၀သုံးမရအောင်
Copy Protected လုပ်လိုက်တာမျိုးတော့သဘောမကျဘူး။ Company တွေကိုကိုယ်ချင်းမစာတာ
တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Protection ပိုင်းကိုလည်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပိတ်ထားပါ။
ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက original ကိုပဲအလွယ်လေးဝယ်သုံးနိုင်ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့
နည်းနည်းတော့ထွက်ပေါက်ပေးထားရမယ်လို့ထင်တယ်။ ဥပမာ။ ။ဒီမှာလည်းလုပ်ဖူးကြပါတယ်။
သီချင်းခွေတွေကို Grade A, Grade B, C, D စသည်ဖြင့် Quality အလိုက်စျေးအမျိုးမျိုးနဲ့
ရောင်းတာမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ Software တွေကိုလည်း တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး
Localized price တွေနဲ့စျေးလျှော့ရောင်းကြတာရှိတယ်။ ပြီးတော့ <a href ="/profile/890/emo">@emoracket<;/a> ပြောသလိုပဲ
free version ထုတ်ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် function အပြည့်တော့မရဘူး၊ ကန့်သတ်ထားတာတွေ၊
delay ဖြစ်တာလေးတွေနည်းနည်းရှိမယ်၊ ကြော်ငြာတွေလည်းပါချင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် license သာဝယ်သုံးမယ်ဆို
ဘယ်လို services တွေထပ်ဖြည့်ပေးမယ်၊ ဘာအခွင့်အရေးတွေရမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။
License ကိုခိုးကူးတာနည်းအောင် freeware နဲ့ကာထားလိုက်တာပေါ့။ အဲဒါကိုထပ်ဆင့်ပြီးစဉ်းစားမိတာက
Software တစ်ခုဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ function တွေရောမလိုတဲ့ဟာတွေရောပါလာတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့မသုံးတဲ့ features တွေအတွက်စျေးပိုပေးပြီးပိုက်ဆံဖြုန်းသလိုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဗျ။
Company ကနေပြီးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပါတဲ့ Free Version တစ်ခုထုတ်မယ်ဗျာ။
ဥပမာ။ ။ Nero Burning Rom ဆိုရင် Data, Video CD, DVD ကူးတာစသည်
အခြေခံသုံးခုထည့်ထားမယ်။ တကယ်လို့ Blu-ray function လိုချင်ရင်ဘယ်လောက်ထပ်ပေး။
ISO ဆိုဘယ်လောက်၊ Audio CD, Erase CD/DVD, Copy Disc, စသည်တစ်ခုချင်းအတွက်
Free သုံးချင်လည်းရတော့အဆင်ပြေတယ်။ Copy-Protected ကိစ္စကို program တွေမသုံးပဲ
Business အမြင်တွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းရင်ပိုကောင်းမလားပဲ။ အဲဒါဆို Copy-Protected နည်းပညာတွေ
အတွက်ရင်းနှီးရတဲ့ပညာရှင်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ၊ အချိန်တွေကို Hacker နဲ့ Virus တွေရန်ကကာကွယ်
ဖို့အတွက်အသုံးချလို့ရတယ်။ နောက်ပိုင်း Software တွေကို Windows based ကနေ Web Based
ပြောင်းတဲ့အခါ Security နဲ့ Copyright Protection ကတစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။